သင်ဟာ အလုပ်ရာထူးတိုးဖို့အတွက် လျှောက်ထားပြီးနောက် ထိုအလုပ်နေရာကိုမရရှိတဲ့အခြေအနေဖြစ်လာတဲ့ အခါ ထိုအခြေအနေကို ဘယ်လိုမျိုးနည်းလမ်းနဲ့ အကောင်းဆုံးကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းနိုင်ပါသလဲ? သင်ဟာ ထိုအလုပ် တာဝန်ကိုရရှိဖို့အတွက် နည်းလမ်းကျကျ အင်တာဗျူးဖြေဆိုခဲ့သည်ဖြစ်စေ၊ သင့်မန်နေဂျာနဲ့ စကားစမြည်ပြောဆို ရင်းရိုးရိုးတမ်းတမ်း မေးကြည့်ခဲ့သည်ဖြစ်စေ အလုပ်ရာထူးတိုးဖို့ (ဒါမှမဟုတ်) လစာတိုးပေးဖို့ပြောဆိုရတာဟာ လွယ်ကူတဲ့အရာတစ်ခုတော့မဟုတ်ပါဘူး။ အကယ်၍ ရရှိခဲ့ရင်တော့ ဒါဟာအရမ်းကောင်းတာပေါ့၊ ဒါပေမယ့် သင့်ကိုလျစ်လျူရှုထားခံရပြီး၊ သင့်ရဲ့တောင်းဆိုမှုကိုငြင်းပယ်ခံရပါက ဘာတွေဖြစ်လာနိုင်ပါသလဲ?
ရာထူးတိုးပေးဖို့အတွက် လျစ်လျူရှုထားခြင်းခံရတဲ့အခါ - အထူးသဖြင့် သင်ဟာထိုနေရာနဲ့ထိုက်တန်တယ်လို့ သင်ခံစားရတဲ့အခါ၊ ဒါမှမဟုတ် ထိုနေရာနဲ့သင့်လောက်မထိုက်တန်ဘူးလို့ သင်ယုံကြည်ထားတဲ့သူတစ်ဦးက ထိုနေရာကိုရသွားတဲ့အခါများတွင် မိမိကိုယ်ကိုယ်ယုံကြည်မှုလျော့ကျစေပြီး၊ လုပ်ချင်ကိုင်ချင်စိတ်မရှိဖြစ်လာ တတ်ပါတယ်။ အလုပ်ရာထူးတိုးပေးဖို့အတွက်တောင်းဆိုခြင်းဟာ ရဲဝင့်စွန့်စားပြီး ရည်မှန်းချက်ကြီးတဲ့ ပြုမူချက် တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ အမြဲတမ်းတော့မဟုတ်ပေမယ့် တစ်ခါတစ်ရံတွင် သင့်ရဲ့သက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှုမှာ ပိုမိုတိုး တက်စေမယ့် တန်ဖိုးရှိတဲ့အကြံပြုချက်တွေနဲ့ အခွင့်အလမ်းအသစ်တွေကိုလည်းရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
သင်ရာထူးမတိုးတဲ့အခါ လုပ်ဆောင်ရမယ့် အချက် (၆) ချက်
အောက်ပါအချက်တွေကတော့ သင့်ဖက်မှရာထူးတိုးရန်တောင်းဆိုပြီးနောက် ရာထူးမတိုးခဲ့ပါက သင်လုပ်ဆောင် နိုင်တဲ့အချက် (၆) ချက်ဖြစ်ပါတယ်။
၁။ သင့်ရဲ့ခံစားချက်တွေကို ခံစားလိုက်ပါ။
ထိုကိစ္စကို သင်ခံစားနေရပြီး စောဒကတက်ဖို့ အချိန်အချို့လိုအပ်ပါက ဒါဟာနားလည်ပေးလို့ရနိုင်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ ခံစားရမှုတွေဟာ စစ်မှန်မှုရှိပြီး လုံးဝမှန်ကန်ပါတယ်။ အလုပ်ရာထူးတိုးဖို့အတွက် လျစ်လျူရှုခံရတာဟာ စိတ် ပျက်စရာကောင်းလှပါတယ်။ နောက်ပြီး အကယ်၍ ထိုရာထူးအတွက် အင်တာဗျူးဖြေဆိုခဲ့ရပါက အချိန်တွေ လည်း အလဟသတ်ဖြစ်ကုန်မှာပါ။
သင့်ရဲ့စိတ်ခံစားမှုများကို ထိန်းချုပ်နိုင်ရန် သင့်ကိုယ်သင်အချိန်အချို့ပေးလိုက်ပါ။ သူငယ်ချင်းတစ်ဦးဦးကို ပြောပြ ပါ၊ ဖြစ်နိုင်ပါက သူ့ကိုတစ်ခုခုဝယ်တိုက်ခိုင်းပြီး သင့်ရဲ့အကြောင်းကိုနားထောင်ပါစေ။
၂။ သင့်ရဲ့ ရာထူးတိုးရန်ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ တောင်းဆိုမှုကို စဉ်းစားဆုံးဖြတ်ပါ။
ထိုခံစားမှုတွေက ဘာတွေပဲဖြစ်ဖြစ်၊ သင့်ရဲ့ခံစားမှုတွေရဲ့နောက်ကွယ်မှာ ဘာတွေရှိနေလဲဆိုတာကိုလည်း သင် တွေးသင့်ပါတယ်။ ဒီ အလုပ်ရာထူးတိုးမှုဟာ သင့်ရဲ့အိမ်မက်လား (သို့) ပိုကောင်းတဲ့ အမည်တစ်ခုသာသာပဲလား? ဒါမှမဟုတ် သင့်ကိုစိတ်ပျက်လက်ပျက်ဖြစ်စေတာက လစာပိုမိုတိုးမလာစေလို့လား (သို့) ကောင်းမွန်တဲ့ ဝေဖန် ချက်တစ်ခုကိုမရရှိခဲ့လို့လား?
မိမိကိုယ်ကို အကဲဖြတ်မှုပြုလုပ်ခြင်းက သင့်ရဲ့နောက်ထပ်လုပ်ဆောင်ရမယ့်အဆင့်တွေကိုတွေးတောနိုင်ဖို့ ကူညီ ပေးနိုင်ပါလိမ့်မယ်။
• သင်လုပ်နေရတဲ့အလုပ်ပုံစံမှာ သင်ပျော်ရွှင်မှုရှိသော်လည်း ပိုက်ဆံပိုရခြင်တာဆိုပါက သင့်အနေနဲ့ ကုမ္ပဏီပြောင်း လိုက်တာက ပိုကောင်းပါလိမ့်မယ်။
• အကယ်၍ ရာထူးတိုးဖို့အတွက် သင့်အနေနဲ့ သင်ယူလိုတဲ့ မတူကွဲပြားတဲ့ ကျွမ်းကျင်မှုအသစ်များကို လိုအပ်နေပါ က ထိုကျွမ်းကျင်မှုများသင့်ထံတွင်ရှိလာဖို့အတွက် လုပ်နိုင်မယ့်နည်းလမ်းများကို သင်ရှာဖွေသင့်ပါတယ်။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ ထိုအခြေအနေကို အခြားသူတစ်ယောက်၏ အမြင်မှကြည့်ရှုပေးပါ။ သင်ဟာ ရာထူးတိုးဖို့ ထိုက်တန်ပါရဲ့လား? အကယ်၍ သင်ဟာ လက်ရှိအလုပ်ဖော်ပြချက် (Job description) အတိုင်းသာအလုပ်လုပ် နေပြီး ထိုအရာထက်ပိုပြီးလုပ်ဆောင်မှုရှိမနေပါက ထိုအချက်ဟာ သင်အလုပ်ရာထူးမတိုးရတဲ့အချက်ဖြစ်နိုင်ပါ တယ်။ နောက်ပြီး သင်ဟာ ထိုရာထူးကို ဘာကြောင့်သင်ရသင့်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်း အချက်အလက်ကျကျ တောင်းဆိုခဲ့တာမဟုတ်ပဲ၊ သင်ဘယ်လိုပဲနေနေရကိုရသင့်တယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ ရာထူးတိုးဖို့ တောင်းဆိုခဲ့ပါက ထို အချက်ဟာလည်း သင်ရာထူးမတိုးရတဲ့အချက်တစ်ခုဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
၃။ အလုပ်ခွင်ထဲတွင် Professional ကျကျ (ပညာရှင်ဆန်ဆန်) နေထိုင်ပါ။
သင်ဟာ စောဒကတက်လိုပါက၊ ငိုကြွေးလိုပါက၊ ညည်းညူလိုပါက ထိုအရာများကို မိသားစုများနဲ့သာ ပြုလုပ်ပါ။ အလုပ်တွင်နှင့် သင့်ရဲ့မန်နေဂျာနဲ့ စကားပြောရတဲ့အခါများတွင် အကြောင်းအရာများကို professional ဆန်စွာဖြင့် အကောင်းဆုံးလုပ်ဆောင်ပါ။ သင်ဟာ သင့်မန်နေဂျာနဲ့ တစ်ဦးချင်းပြောဆိုရပြီး ထိုသတင်းကိုကြားသိရသည့် အခါ၊ တုန့်ပြန်မှုပေးရာတွင် ယဉ်ကျေးမှုရှိပါစေ။ “ကျွန်တော်/ ကျွန်မကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားပေးတဲ့ အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။” စသည့်ပုံစံနှင့် ပြောဆိုသင့်ပါတယ်။
၄။ သင့်မန်နေဂျာထံမှ အကြံပြုချက်များကို တောင်းခံပါ။
သတင်းများကြားသိပြီးနောက်ရက်တွင် သင့်ရဲ့မန်နေဂျာ၊ သို့မဟုတ် ထိုဆုံးဖြတ်ချက်ကိုပြုလုပ်ရာတွင် ပါဝင်တဲ့ အခြားသော အထက်လူကြီးများကိုဆက်သွယ်ကာ သင်ဘာကြောင့် ရာထူးမတိုးရသလဲဆိုတဲ့အပေါ် ဝေဖန် အကြံပြုချက်များပေးနိုင်သလားဆိုတာကို မေးမြန်းကြည့်ပါ။ အနာဂါတ်တွင် ရာထူးတိုးလာစေရန်အတွက် သင် ဘာတွေပြုလုပ်နိုင်သလဲဆိုတာကို ရှာဖွေဖော်ထုတ်ပါ။
ထိုအရာနဲ့ပက်သက်ပြီး သင့်ကိုအကူအညီမပြုနိုင်တဲ့ ထပ်တလဲလဲကြားနေရတဲ့ ဝေဖန်မှုများကိုသာ ရရှိဖို့လည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ များသောအားဖြင့် လူတို့ဟာ ဝေဖန်မှုများကို သူတို့အကြားမျှဝေပြောဆိုဖို့ကို စိတ်မသက်မသာ ဖြစ်တတ်ကြပါတယ်။ သို့သော်လည်း ထိုသို့ ဝေဖန်မှုများကို လက်ခံနားထောင်ခြင်းအားဖြင့် သင်လုပ်ဆောင် နိုင်မယ့် အသိအမြင်တစ်ခုကိုရရှိသွားနိုင်ဖို့လည်း ဖြစ်နိုင်စေမှာဖြစ်ပါတယ်။ သင်တန်းတက်ရောက်ခြင်း၊ ဒါမှ မဟုတ် လုပ်ငန်းပရောဂျက်အသစ်တစ်ခုတွင် ကူညီပေးခြင်း စသည်တို့ကိုပြုလုပ်ခြင်းအားဖြင့် ရရှိနိုင်သည့် အဓိကအရေးပါသော ကျွမ်းကျင်မှုတစ်ခု သင့်ထံတွင်ရှိမနေသောကြောင့်လည်း ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
၅။ နှိုင်းယှဉ်မှုများကိုပြုလုပ်လိုစိတ်အား ထိန်းချုပ်ပါ
အကယ်၍ သင်ရာထူးတိုးမခံရပဲ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တစ်ဦးမှ ရာထူးတိုးသွားခဲ့ပါက ထိုအရာကိုလက်ခံနိုင် ဖို့မှာ တော်တော်ခဲယဉ်းပါလိမ့်မယ်။ သင့်ပတ်ဝန်းကျင်ရှိ အခြားသောသူများနှင့် နှိုင်းယှဉ်မှုပြုလိုစိတ်များ ကို ထိန်းချုပ်ပါ။ ဒီအရာက သင့်ရာထူးတိုးစေဖို့အတွက် အကူအညီပေးမှာမဟုတ်ပဲ ထိုကိစ္စကို သင့် မန် နေဂျာကို သွားရောက်ပြောဆိုမိပါက သင့်အား အမြင်ကျဉ်းမြောင်းသူဟု ထင်မြင်သွားစေနိုင်တဲ့အတွက် ပါ။
၆။ သင့်ရဲ့ သက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှု နည်းဗျူဟာကို စီစဉ်ပြုလုပ်ပါ။
အနာဂါတ်တွင် သင့်ကိုရာထူးတိုးမြင့်ပေးမှုဖြစ်လာစေနိုင်တယ်လို့ သင်ခံစားရပါသလား၊ ဒါမှမဟုတ် ဒီ ကုမ္ပဏီမှာ သင်ဟာ အမြဲတမ်း ချန်လှပ်ခံဘဝပဲဖြစ်နေနိုင်သလား။ အကယ်၍ ချန်လှပ်ခံဘဝပဲ ဆက်ဖြစ် နေဦးမယ်ဆိုရင်တော့ သင့်ရဲ့အလုပ်လျှောက်လွှာကို မွမ်းမံပြင်ဆင်ပြီး နောက်ထပ်အလုပ်တစ်ခုကို ရှာ ဖွေလိုက်ပါ။
အကယ်၍ ရာထူးတိုးဖို့ဖြစ်လာနိုင်တယ်ဆိုရင်တော့ သင့်ကိုယ်သင်အချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခုသတ်မှတ် ပြီး အလုပ်ရာထူးတိုးမှုဖြစ်ပေါ်လာစေရန် အခွင့်အလမ်းပိုများစေနိုင်မည့် အပြောင်းအလဲများဖြစ်ပေါ် လာစေရန်အတွက်ပြုလုပ်လိုက်ပါ။ ထို့နောက်သင့်ရဲ့မန်နေဂျာနဲ့တွေ့ဆုံရန်ရက်တစ်ခုသတ်မှတ်ပြီးနောက် နောက်တစ်ကြိမ်တောင်းဆိုကြည့်ပါ။